အခုလို အေးဆေးနေနိုင်ဖို့က တစ်ချိန်က အလုပ်တွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက် – Suehninsi
အခုလို အေးဆေးနေနိုင်ဖို့က တစ်ချိန်က အလုပ်တွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်
တချိန်က နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ဇေရဲထက်ကတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေအတော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ တိကျပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အပြင် ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်လက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့
သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ ဇေရဲထက်က အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး အိမ်မှာပဲ သူရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူ နွေးထွေးပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်……။ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ သိပ့်မလုပ်ဖြစ်တော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်
သူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တိုင်းကို တင်ပေးလေ့ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်. ။ ယနေ့မှာလည်း ယခင်က ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးတွေထဲက ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ ပုံလေးတွေထဲမှာ ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့
စတိုင်အပြည့်ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း တင်ပေးလါတာပါနော်။ ဒါ့အပြင် ” calenderတွေ အရမ်းရိုက်ခဲ့ calenderရိုက်လို့ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ တက္ကစီခပေး videoတွေပြေးရိုက် ပြန်လာတော့ 7လွှာ တိုက်ခန်းသူငယ်ချင်းအိမ်ပေါ်တတ်နေ မောလိုက်တာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့
အရမ်းပင်ပန်းခဲ့တာကိုး ဒါပေမယ့်အခုချိန်မှာ ဒါတွေက အခုလိုအနေအထားတခုဖြစ်ဖို့ပဲလေ ရိုက်ရင်းရိုက်ရင်း ဝလာသော ကိုယ် ပြန်လျော့ယူရတာ ပင်ပန်း” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုပါ ရေးသားထားပါသေးတယ်။ မင်းသားချော ဇေရဲထက်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…… ။
တခြိနျက နှုတျခမျးနီမလေးတှေ သညျးသညျးလှုပျ အားပေးကွတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသားခြော ဇရေဲထကျကတော့ ဗီဒီယို ဇာတျကားတှအေတျောမြားမြားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ တိကပြိုငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့အပွငျ ဇာတျကားတှကေိုလညျး ဆကျတိုကျလကျခံရိုကျကူးခဲ့ရတဲ့
သူပဲဖွဈပါတယျ။ ယခုလကျရှိမှာတော့ ဇရေဲထကျက အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ခတ်ေတရပျဆိုငျးထားပွီး အိမျမှာပဲ သူရဲ့မိသားစုတှနေဲ့အတူ နှေးထှေးပြျောရှငျစှာ နထေိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ……။ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ သိပျ့မလုပျဖွဈတော့ပမေယျ့ ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျအသှယျမပွတျရအောငျ
သူရဲ့ ဖဘှေ့တျစာမကျြနှာကနေ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျတိုငျးကို တငျပေးလရှေိ့နတောလညျး ဖွဈပါတယျ. ။ ယနမှေ့ာလညျး ယခငျက ရိုကျကူးခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကားလေးတှထေဲက ပုံလေးတှကေို တငျပေးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ…။ ပုံလေးတှထေဲမှာ ပွညျ့ဖောငျးနတေဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့
စတိုငျအပွညျ့ဓာတျဖမျးထားတဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး တငျပေးလါတာပါနျော။ ဒါ့အပွငျ ” calenderတှေ အရမျးရိုကျခဲ့ calenderရိုကျလို့ရတဲ့ပိုကျဆံလေးနဲ့ တက်ကစီခပေး videoတှပွေေးရိုကျ ပွနျလာတော့ 7လှာ တိုကျခနျးသူငယျခငျြးအိမျပျေါတတျနေ မောလိုကျတာ ပွနျစဉျးစားကွညျ့တော့
အရမျးပငျပနျးခဲ့တာကိုး ဒါပမေယျ့အခုခြိနျမှာ ဒါတှကေ အခုလိုအနအေထားတခုဖွဈဖို့ပဲလေ ရိုကျရငျးရိုကျရငျး ဝလာသော ကိုယျ ပွနျလြော့ယူရတာ ပငျပနျး” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုပါ ရေးသားထားပါသေးတယျ။ မငျးသားခြော ဇရေဲထကျရဲ့ ပုံလေးတှကေို ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော…… ။
Source : Zay Ye Htet’s Facebook | Reference & Credit : Myanmarload
ရုံးချိန်းကို ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင်
ချွေးတဒီးဒီးကျတဲ့အထိ မာလာရှမ်းကောကို အားရပါးရစားပြခဲ့တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ
အွန်လိုင်းကနေ သိန်းပေါင်း(၇၀၀၀)တန် အိမ်ကြီးကို ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အရမ်းပျော်နေတယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး